Maty Tao Anatin’Ilay Lozam-piarakodia ‘Mampiahiahy’ Ny Mpikambana iray Ao Amin’ny Parlemanta Any Zimbaboe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2013 4:43 GMT
Edward Chindori-Chininga dia namoy ny ainy ny 19 Jona 2013, taorian'ilay lozam-piarakodia izay tsy nahafahan'ilay fiara nentiny nijanona intsony ka nidona taminà hazo. Chindori-Chininga, mpikambana tao amin'ny komitin'ny parlemanta misahana ny fitrandrahana sy ny angovo ary Ministra teo aloha, dia teo an-dalàm-panaraha-maso ilay voalaza fa halatra diamondra mitranga any an-toerana araky ny voalazan'ireo mpiara miasa aminy ao amin'ny Vondrona Nasionaly Afrikana Tarihan'i Robert Mugabe (Antokon'ny Tia tanindrazana).
Tamin'ny herinandro lasa iny, namoaka tatitra mampiseho amin'ny antsipiriany ny fandraisan'anjaran'ireo mpiasan'ny Orinasa ZANU PF sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny tontolon'ny fitrandrahana diamondra amin'ilay raharaha i Chindori-Chininga.
Maro ireo mponina ao Zimbaboe no miahiahy ihany nohon'ny hamaroan'ireo lozam-piarakodia mampiahiahy nisy tao Zimbaboe ahitàna mpanao politika ambony. Nanomboka tamin'ny taona 1980, taona izay nahazoana ny fahaleovan-tena, dia efa maro ireo mpanao politika namoy ny ainy taminà lozam-piarakodia, namela fanontaniana maro tsy hay valina mikasika ireny lozam-piarakodia mampiahiahy ireny.
Izany no nandrisika ireo mponina ao Zimbaboe hisafidy ireo vohikalam-pampielezam-baovao sosialy hanehoana ny hatezerany sy ny ahiahiny amin'ilay tranga heverina fa vono olona ara-politika hafa indray eo amin'ny tantara mifamahofahon'ny Zanu PF.
Nandrakitra ny fiahiahian'ny mpamaky iray ilay mpanao gazety Lance Guma, raha nanoratra tamin'ny Facebook izy:
Baba Jukwa, Pejy Facebook malaza iray tsy fantatra anarana izay mahafantatra ny tetika politikan'ny Zanu PF, no voalohany nampitandrina fa misy mikasa hamono an'Itompokolahy Mpikambana tao amin'ny Parlemanta teo aloha. Nolazainy an-kolaka fa noheverin'ny ao amin'ny Zanu PF fa i Chindori-Chininga no tao ambadiky ny Baba Jukwa. Taorian'ny nahafatesany, nanoratra Baba Jukwa hoe :
Nilaza ny ministra David Coltart (@DavidColtart) tao amin'ny Twitter :
Nqaba Matshazi (@nqabamatshazi), mpanao gazety, dia nilaza :
Noho izao taom-pifidianana izao ao Zimbaboe, nanamarika ny mpanao gazety Nqobile Bhebhe (@nqobilebhebhe) :
Sal Amanda (@Zimbird) dia nilaza :